कस्ता नागरिक नेपाल फर्कन सक्छन् ?
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने प्रकृया थालेको छ । नेपाल फर्कन चाहनेहरुको विवरण संकलन सम्वन्धित देशको नेपाली राजदूतावासले थालिसकेका छन् । ति दूतावासहरुले नेपाल फर्कनेहरुले अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने जनाएका छन् । नेपाल सरकारले स्वदेश फर्किन चाहनेहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा ल्याउने नेपाल सरकारले बताएको छ । विस्तृतमा
विराटनगरबाट गाई काटेको आरोपमा १ जना पक्राउ, फरार दुई जनाको खोजी
महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनकक्ष कोरोना भाइरसका बिरामीले भरिभराउ भएपछि...
अरनिको राजमार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा गरिँदै
कालो सुन ‘अलैँची’मा रोगको सङ्क्रमण, किसान चिन्तित
इलाम । राम्रो आम्दानी लिइरहेको अलैँची पछिल्लो समय फेरि मर्न थालेपछि किसान चिन्तित देखिएका छन् । अलैँचीमा फेरि रोग लागेर राम्रो फल दिन छाडेपछि किसान चिन्नित बन्न पुगेका हुन् । केही वर्ष अघि पनि यस्तै रोगले आक्रमण गरेपछि किसानले फेरि अलैँची खेती गरेका थिए ।
बलात्कार मुद्दाका फरार खत्री अभियुक्त पक्राउ
के हो डेंगु ? डेंगु परीक्षण गर्न आउने बिरामीको भीड !
काठमाडौं । डेंगु रोग एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । पोथी जातको सो लामखुट्टेको टोकाइको भाइरसबाट सङ्क्रमित भई रोग सर्दछ । विसं २०७६ को वैशाखदेखि हालसम्म छ हजारभन्दा बढी बिरामी भइसकेका जनाइएको छ ।
काठमाडौँ । चिनीयाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणबार ‘सकारात्मक संकेत’ दिएका छन् ।
यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पूर्व सभासद पक्राउ
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पूर्व सभासद योगेन्द्र घिसिङ पक्राउ परेका छन् ।
मन्त्री चढेकाे गाडी हिलाेमा फँसेपछि...
पातारासी गाउँपालिका– २ तल्फी गाउँ जुम्लामा निर्मित ‘छन्चरी हाल्ना जडिबुटी प्रशोधन उद्योग’को उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा हिलाम्य सडकममा फसेको कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सवार गाडी धकेल्दै स्थानीयवासी ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को ओसाका (जापान) सिधा उडानले मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री यी चन्द्रागिरि पुगे
काठमाडौँ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चन्द्रागिरि आसपास ट्रेकिङ गरेका छन् । सोमबार बिहान चन्द्रागिरि पुगेका यीले चन्द्रागिरि आसपासमा झन्डै डेढ घन्टा बिताएका हुन् । केबुलकारबाट माथि पुगेका उनी पैदल नै घुमेका हुन् । त्यहाँ पुग्दा उनले नेपालको भौतिक विकासमा गतिलो उदाहरण दिएको बताउँदै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस्तै संरचनाहरुको आवश्यकता रहेको समेत बताए ।
दैलेख । सुर्खेतबाट डोल्पाका लागि उडेको माउण्टेन एयरको नाइनएन–एएलडी हेलिकप्टर खराब मौसम भएपछि स्थानीय बारुदथानमा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ ।